Midi-Midi Ku Taag Miyaa? Gareth Bale Oo LABA Shuruudood Oo Adag Ku Xidhay In Uu Santiago Bernabeu Ka Baxo Iyo Jawaabta Uu Ciqaabta Zidane Ka Bixiyay Oo La Helay. - Gool24.Net
Xidhiidhka Zinedine Zidane iyo Gareth Bale ayaa gabi ahaanba burburay wuxuuna dhaafay heer dib u habayn lagu samayn karo.
Zinedine Zidane ayaan waxba u reebin Gareth Bale wuxuuna tusay wax walba oo ay suurtogal ahayd in uu ugu sheego in aanu qorshihiisa xili ciyaareedka cusub wax door ah ku lahayn.
Hadaladii ugu danbeeyay ee uu Zidane ku sharaxay sababtii uu Bale u ciyaarsiin waayay kulankii Real Betis ee loo arkayay in ay macasalaamayn ahayd ayaa wax walba muujiyay laakiin arintu intaas kuma dhamaanayso.
Gareth Bale ayaa doonaya in aanu si sahlan kaga bixin Real Madrid wuxuuna diyaar saday qorshe adag oo ay tahay in ay Madrid xal muhiim ah u hesho si xidiga reer Wales looga saaro Bernabeu.
Wargayska El Confidencial oo inta badan soo bandhiga siraha qarsoon ee kubbada cagta Spain ayaa shaaciyay waxa uu Bale la damacsan yahay Zidane iyo kooxdiisa Madrid.
Sida lagu shaaciyay El Confidencial, Gareth Bale ayaa marka hore doonaya in ay Real Madrid isaga siiso lacag dhan 51 milyan yuro oo ah lacagta mushaarkiisa saddexda sanadood ee heshiiskiisa Bernabeu baaqiga ka ah.
Laakiin intaas oo kaliya ma aha balse waxa uu sidoo kale doonayaa in uu helo dalab koox kale oo mushaarkeedu la mid yahay 17 milyan yurada uu hadda ka qaato Los Blancos si uu wada xaajood uga gali karo in uu baxo.
Shuruuda kowaad waa mid Real Madrid gacanteeda ku jirta oo ay wada xaajood kala yeelan karto Bale isla markaana ay xataa ku huri karto in ay lacagta mushaarkiisa ee saddexda sanadood ee baaqiga u ah siin karto laakiin shuruuda labaad ayaa ah mida ugu adag.
Ilaa hadda Real Madrid ayaa ku dhibtoonaysa in ay hesho koox dalab rasmi ah ka soo gudbisa Gareth Bale iyada oo xaalada xun ee uu xili ciyaareedkan ku soo jiray ay saamayn ku yeelanayso kooxihii hore u xiisaynayay.
Qiimaha suuqa kala iibsiga ee Gareeth Bale ayaa hoos ugu soo dhacay 70 milyan yuro halka uu Real Madrid sanadkii 2013 kii uu ugu soo biiray lacag markaas rekoodh aduun ahayd oo 101 milyan yuro ahayd.
Shuruudaha uu Gareth Bale qabsaday si uu Santiago Bernabeu uga baxo ayaa hal xidhaale wayn ku ah Florentino Perez oo waqti dheer xidiga reer Wales garabkiisa taagnaa balse hadda ku qasban in uu Zidane taageero.
Waxay u muuqataa in sheekada is jiid-jiidahsada Zinedine Zidane iyo Gareth Bale ay xagaaga oo dhan socon doonto maadaama oo uu qabsaday in marka hore la siiyo 51 milyan yuro oo heshiiskiisa baaqi ka ah iyo in uu helo dalab kale oo uu ku qaadanayo isla lacagta uu mushaar ahaan Madrid uga qaato.
Si kastaba ha ahaatee, arinta Bale iyo Zidane ayaa noqotay midi-midi ku taag iyo ismari waa la filayo in uu sii jiitami doono ilaa inta la helayo koox Bale u rumayn karta shuruuda mushaarkiisa ee uu heli doono.